शीतल कादम्बिनी अर्थात् सफल सर्जकMain Samachar
४ बैशाख २०७८, शनिबार १०:४५ प्रकाशित
काठमाडौं । नेपाली गजल र गीत लेखनमा कैयन् नाम छन्। तीमध्ये एउटा स्थापित नाम हो शीतल कादम्बिनी।
नाम जस्तै शीतल उनी नयाँ पुस्तासँग हातेमालो गर्न रुचाउँछिन्। उनलाई आफूले कमाएको चर्चा र सम्मानको घमण्ड छैन। उनी जस्तो सुकै उमेर समूहका व्यक्ति उस्तै व्यवहार गर्छिन्। यो उनको विशेषता हो।
उनको बुझाई छ, ‘नयाँ पुस्तासँग उर्जा हुन्छ। केही गर्ने हुटहुटी हुन्छ। जसले मलाई पनि उत्प्रेरित गरिरहन्छ।’ सदैव मुस्कानसहित गजल मुसायरादेखि कवि गोष्टीसम्म पुगिरहन्छिन् उनी।
साहित्य वृत्तमा उनी सबैभन्दा व्यस्त साहित्य सर्जकमध्ये एक हुन्। उनी आफूले मात्र साहित्य सुनाउँदिनन् नयाँ तथा पुराना सर्जकको लेखनलाई गम्भीर रुपले सुन्छिन्।
कहिलेकाहिँ नयाँ पुस्ताको लेखनले उनलाई विरक्तपनि चल्छ। तर, उनी उनीहरुको मन दुखाउँदिनन्। छर्छिन् आफ्नै मनको कुनामा शब्दको बिउ। अनि उमार्छिन् युवा पुस्तालाई ‘च्यालेन्ज’ गर्ने सेर।
मन बेचेर खुशी किन्छन् शहरका मान्छेहरु
नौनी जस्तै कुरा गर्छन् पत्थरका मान्छेहरु
म मनका गह्राहरुमा माया नै माया उमारिदिन्छु।
जवानी मलाई देउ ए! भर्खरका मान्छेहरु
गीत, गजल र उपन्यास लेखनमा सक्रिय उनी नेपाली गजल लेखन र गीत लेखनमा छुट्टै पहिचान बोकेकी छिन्। करिब तीन दशक नेपाली गजल लेखिरहेकी उनी ५० दशकमा नेपाली गजलमा आएकी हुन्।
उनी विगतबारे सम्झना गर्छिन्, ‘गजल लेखनको अवधि लामो पो भइसक्यो त।’ अझैपनि उनले गजल लेखिरहेकी छिन्। गजलमा उनी बहर, गैर-बहर जुन धारमा पनि उनले कलम चलाउन सक्छिन्। उनका गजलका विम्बमा सामाजिक विषय त छन् नै त्यो भन्दा राम्रा श्रृङ्गारिक पनि छन्।
उनका गजलको सरलता र सरलताले बोकेका गम्भीर बिम्ब सुन्दर मात्र हुँदैनन्। एकपटक सोच्न बाध्य पार्ने खालका हुन्छन्। गजलको स्तरियसँगै वाचनमा पनि उनी उस्ताज छिन्।
उनको वाचन कलाले माहोल आफूतिर तान्न सक्ने तागत राख्छ। ‘गजल लेखन अभ्यास, रहर र सोख समिश्रण हो। अध्ययनको व्यापकताले पनि गजलका सेरमा फरक कोणका बिम्ब निर्माण गर्न सकिन्छ’, उनी सुनाउँछिन्।
पहिलो गजलसंग्रह ‘सुगन्ध-यात्रा’लगायत अन्य कृति प्रकाशित छन्। गजल जस्तै उनी गीतकारका सफल छिन्। ‘धेरैचोटि मरेँ म त”झुमा झुम्कावाली’सम्मका गीत सफलताका सूचक हुन्। उनका आधुनिक देखि फिल्मी गीत बजारमा आइरन्छन्।
‘शीतल’, ‘कादम्बिनी’, ‘निर्झरी’ एल्बमहरू बजारमा छन् भने उपन्यास सार्वजनिक हुने अन्तिम तयारीमा छ। कोरोना संकट नभएको भए उनको उपन्यास आइसक्ने थियो।
नेपाली गजलको स्वर्णिम युग
नेपाली गजलको स्वर्णिमकालका रुपमा ६० को दशकलाई मानिन्छ। तर, शीतल त्यो भन्दा अगाडिबाट नेपाली गजल लेखनमा सक्रिय रहेकी थिइन्। उनको आगमन हुदाँ नेपाली गजल एउटा स्वर्णिम यात्राको बाटोमा थियो। त्यो बाटोमा यात्रा गर्न उनी आइपुगेकी हुन्।
६० को दशकमा आउने धेरै गजलकारहरु अहिले पनि गजल लेखिरहेका छन्। कोही उपन्यास लेखनमा व्यस्त छन्। कोही कविताको रसमा झुमिरहेका छन्। शीतल भने साहित्यका अनेक विधामा कलम चलाइरहेकी छिन्।
गोरखादेखि नेपालगंज, नेपालगंजदेखि चितवन
काठमाडौंलाई कर्मथलो बनाएकी शीतलको पुख्रयाैली घर गोरखा हो। तर उनी चितवनमा जन्मिइन् । चितवनबाट नेपालगंज पुगिन्। नेपालगंजबाट समयले पुन: चितवन ल्यायाे । त्यसपछि भने उनी काठमाडाैं आइपुगिन् ।
‘एक जीवन फरकफरक भूगोल। छैन त गज्जब’, उनी मुस्कुराउँछिन्। नेपालगंज हुँदा उनी रेडियो नेपाल खुबै सुन्थिन्। रेडियो सुन्ने लतका कारण उनी त्यहाँ बज्ने गीत नसुन्ने कुरै भएन्। अग्रज स्रष्टाका गीतले उनको बालसुलभ मनमा पनि गीतकार बन्ने रहर निर्माण गरिदियो।
‘मलाई गायक वा गायिकाको स्वर भन्दा गीतमा प्रयोग हुने शब्दले आकर्षित गर्थ्यो। आज पनि गर्छ’, उनी सुनाउँछिन्, ‘शब्दकाे महत्व के हुन्छ भन्ने कुरा नै मैले अग्रजहरूको शब्दचयनबाट सिकेको हुँ।’
गजलमा चितवन, चितवनमा शीतलको गजल
नेपालगन्जबाट ०५६ सालमा उनी चितवन आइन्। त्यसपछि उनले गजल कार्यक्रम सुन्न थालेकी हुन्। २०५८ को मध्यतिर सिनर्जी एफएम खुल्यो। सिनर्जी एफएममा अर्जुन पौडेलले गजल कार्यक्रम ‘अनुराग’ चलाउँथे।
स्वर जस्तै पौडेलको गजल वाचन गर्ने शैली पनि रोचक थियो। उनले पनि गजल लेख्न थालिन्। पठाइन् पनि। गजल भनेर पठाएको गजलमा हुनुपर्ने आधारभुत तत्व नभएकाले अर्जुनले वाचन त गरिदिए। तर,अर्कै नाम दिएर।
उनी भन्छिन्, ‘मिहिनेत गरेर लेखेको गजललाई अर्कै नाम पो दिएपछि अलि अलि झोंक चलेको थियो। तर, झोंकलाई शक्तिमा बदले। मैले गजलबारे अध्ययन गरेँ।’
गजलबारे उनले चितवनमा अध्ययन गरेको उनी स्विकार्छिन्। गजलमा उनको आकर्षण बढ्यो। त्यसबेला चितवनमा गजलबारे ज्ञाता थिए गोविन्दराज विनोदी, प्रेमविनोद नन्दन लगायतका अग्रज स्रस्टा। उनले विनोदिसँग गजलबारे धेरै कुरा ज्ञान आर्जन गरेको बताउँछिन्।
‘मेरा गजल लेखनको सुरुवाती दिनमा विनोदी सरको सिकाइ महत्वपूर्ण छ। सरको खुला हृदय मेरा लागि सदैव सम्मानित रहेको छ’, उनी विनोदीप्रति सम्मान प्रकट गर्छिन्।
उनलाई गजलमा लाग्न प्रेरित गर्न प्रेमविनोद नन्दन, विनोदीको हात जति छ, त्यति नै हात चितवनका रेडियोको पनि रहेको उनले बताइन्। अचेल गजलमा सवाल जवाफको चलन पनि बढेको छ। नेपाली गजलमा सवाल जवाफको सुरुवात पनि शीतल प्रेमविनोदले गरेका हुन्।
एक साँझ उनलाई अपरिचित नम्बरबाट ‘म आएँ’ म्यासेज आएको थियो। गजलको मोहले यसरी गाँजेको थियो कि शीतलले म्यासेजलाई गजलबाट जवाफ फर्काइदिइन्।
गजल यस्तो थियो :
कहाँ थियौं तिमी रंगमञ्च उठेपछि आयौं
समयले जवानी यो लुटेपछि आयौं
ओइलिएका रहरहरु पलाउँछन् की फेरि
सम्झनाको असिनाले चुटेपछि आयौं
तिमी र म सँगसँगै गर्नुहुन्थ्यो यात्रा
जिन्दगीलाई बोक्ने गाडी छुटेपछि आयौं
शिव परियार र अन्जु पन्तले गाएको यो गीत ६४ तिर बजारमा आएको हो। देशमा राजनितिक संकट केहि हदसम्म साम्य भएको बेला यो गजलले तहल्का पिटेको थियो।
किनभने द्वन्द्वको अवसानपछि वर्षौंपछि परदेशिएकाहरु फर्किएका थिए। युद्धको मैदानमा हुनेले आफ्नो परिवार भेट्दै थिए। वर्षौंपछि मिलनमा ति परिवारका सदस्यमा आएको परिवर्तनको केहि झल्को गजलले दिएको थियो।
‘कसैलाई जवाफ फर्काएको गजल समाजको घटनासँग मिल्न गयो। जसले गर्दा हिट हुन पुग्यो’, शीतल भन्छिन्, गीत गजलहरुका भाग्य अजीवका हुन्छन्। कुन कतिखेर हिट हुन्छ। पत्तो हुदैँन।’
बचपनमा गीत रेकर्डको सोख
रेडियो बज्ने गीतको नक्कल गर्दे उनले आफूले लेखेका गीत रेकर्ड गर्थिन्। उनले लेखेका गीतलाई दिदीले गज्जब छ भनिदिन्थिन्। दिदीले नै गज्जब भनिदिएपछि उनले आफूलाई खतरै गीतकारको महसुस गर्थिन्। बचपनका ति हर्कत विस्तारै लतमा परिणत भए। उनले लेखनलाई बढाउँदै गइन्।
अहिलेपनि बचपनमा लेखेका गीतहरु उनको घरमा सुरक्षित छन्। उनी सुनाउँछिन्, ‘ति सिकाइका क्रममा लेखिएका गीत हुन्। मैले संगालेर राखेकी छु।’
साहित्य होस् या कला त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने कला हुनुपर्ने उनी सुनाउँछिन्। अध्ययनबिना साहित्यमा नलाग्न उनको सुझाव छ। क्षणिक चर्चाको लोभको लागि झन यो क्षेत्रमा नआउँदा नै उत्तम रहेको उनले सुनाइन्। साहित्यमा नेतालाई गाली, आफ्ना कुण्ठा, उत्ताउला कुरा लेखेर क्षणिक रमाइलो हुने भएपनि दिर्घकालिन नहुने उनले बुझेकी छिन्।
उनको एउटै सिद्धान्त छ, ‘गीत र गजलका शब्दले सास फेर्नुपर्छ।’ अहिले बजारमा आएका गीत र गजलबारे उनी असन्तुष्ट छैनन्। यसबारे बुझेकाहरूले राम्रो लेखिरहेका छन्। बुझ्न बाँकीले प्रयास गरिरहेको उनकाे तर्क छ ।
३० वटा गीत आउने तयारी
कतिपयले नेपाली संगीत क्षेत्र व्यवसायिक भइसकेको छैन भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका हुन्छन्। यो क्षेत्रमा थोरैमात्र व्यक्तिले आफ्नो जीवन धान्न सकेका उदाहरण छन्।
उनले गजल वाचन गर्दा बहरबद्ध गजल गाउँछिन् पनि। यद्यपी उनले आफूलाई गायिका हुने सपना देखिनन्। ‘जसले जे सक्छ। त्यहीँ गर्ने हो। मेरो स्वर भएपनि गायिका होइन्। सायद गायनको साधनाको अभाव छ मसँग’, उनी सुनाउँछिन्।
गीतकारका रुपमा उनी बाँचिरहेकी छिन्। ७८ सालमा मात्र उनका ३० वटा गीत आउँदै छन्। सधैँ हँसिलो मुद्रामा देखिने उनलाई पंक्तिकारले सोध्यो। तपाई अन्तिमपटक कहिले रिसाउनु भएको थियो?
उनी उस्तै अन्दाजमा सुनाउँछिन्, ‘एकबारको जूनिमा हाँसेर बाँच्ने हो। पीडा, दु:खान्त अतित पनि छन्। तर, पीडालाई अनुहारमा देखाएर हुँदैन। पीडालाई खुशीले जित्ने हो।’
उनलाई जीवनसँग कुनै गुनासो छैन। कुण्ठाग्रस्त जिन्दगी बाँच्न उनलाई मञ्जुर पनि छैन । उनी सुनाउँछिन्, ‘ दुनियाँका मान्छेहरुको फरकफरक जीवन पढ्दापढ्दै जीन्दगी सकिदिने हो। एकबारको जुनिमा हाँसेर र हँसाएर बाँचौ।’
गयो रात के भो बिहानी छ बाँकी
अझै लाग्छ मेरो जवानी छ बाँकी
चुमेको निकै भो कहाँ सक्छु मेट्न
गुलाबी अधरको निशानी छ बाँकी
भरे साँझ भेटौं मिलाएर मौका
अनौठो र मिठो कहानी छ बाँकी ……